नेदरल्यान्ड्सका लागि इन्भोर्सर्स सुरक्षा नेट रणनीति रबर्ट जेन्ससेन र जेन्सेन.इल? मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	24 अप्रिल 2019 मा	• 11 टिप्पणिहरु
जितनी बित्तिकै रोबर्ट जेन्सेनलाई ट्याबमा फर्केर जाने अनुमति दिइएको थियो, त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँ पुग्यो बाट हटाइयो। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहेकी थिईन। उनीहरुका अनुसार उनीहरुका लागि एक अर्काको बारेमा जानकारी दिएका छन। त्यो अजीब लाग्छ, तर यसले विश्वसनीयता दिन्छ। त्यसोभए तपाईं अझ बढी सार्थक भन्न सक्नुहुन्छ कि मुख्यधारा मिडिया विरोध गर्न सुन्न चाहँदैनन् र तपाईं क्रेडिट जित्नुहुन्छ। यो केहि हद सम्म डोनाल्ड ट्रम्प को "तपाईं नकली समाचार" कल र उनको समर्थन को समय समय मा Infowars.com वेबसाइट को लागि समर्थन गर्दछ। इन्भोर्सहरूले कुनै हानि गरेन।
यो देखिन्छ कि रोबर्ट जेन्सेन को लागी महत्वपूर्ण विचारधाराहरु को बढती समूह मा कब्जा गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ। पहिला तपाईं तिनीहरूलाई स्पष्ट स्ट्याम्पमा छ्याउन र दायाँ-ह्यान्ड कुनामा राख्न सक्षम हुनुपर्दछ। यसलाई स्ट्रिटिमेटिज भनिन्छ। तपाइँ पनि त्यो समूहलाई फोरम डेमोक्रेसी (FvD) जस्ता दायाँ पङ्क्ति पक्षहरूलाई पनि लिंक गर्न चाहानुहुन्छ; त्यो पार्टी जो एकदम ठूलो हुन्छ र जसको रणनीति अहिले हो पार्टीमा भाग लिनु सफलता को थोडा थोडा धीमा गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ (हामी यसलाई कहाँ पुग्छ) पहिले देखियो?)।
रोबेलको नेदरल्याण्ड्सका एलेक्स जोन्सहरू हुनुपर्दछ? रबर्ट "म विद्रोही हुँ र म सबै कुरा भन्न चाहन्छु कि अरू अरु गर्न को लागी हिम्मत गर्दैन"हो, धेरै डच मान्छे जस्तै कि; त्यसकारण तिनीहरू किन वाइल्डर्सहरूमा यति निर्भर छन् र अब केहि हाउजुडिटमा छन्। दुई जनाले एकैचोटि एकदमै रोचक भूमिका खेल्छ, तर एक राजनीतिक मोटाइको साथ। रबर्ट सक्षम थिए कि कम्युनिस्ट कम्युनिकेशनको लागि छोटो समयको लागि हराइरहेको थियो र अब आफ्नै वेबसाइट मार्फत जान्छ jensen.nl गर यस तरिकामा मानिसहरूले आशा गर्ने व्यक्तिलाई आशा गर्छन् जुन केहि हदसम्म महत्वपूर्ण छ, तर धेरै धेरै थाहा छैन कि सुरक्षा नेट रणनीतिहरू सेट अप गर्दैछन्। यदि डच एलेक्स जोन्स हुनु पर्छ भने हामी आश्चर्यचकित हुनुपर्दछ। "विपक्षी नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका यो आफैलाई नेतृत्व गर्न हो"। शुरुवाती दिनमा उनको वेबसाइटको 'हेर्न र महसुस' Infowars.com को धेरै समान छ। अन्तमा, हामी अमेरिकीहरूको धेरै सिक्न सक्छौं।
राजनीति र मिडिया मुख्यतः अन्तरक्रियाको बारेमा हुन् जुन समाजमा वर्गहरू वर्गीकरण गर्न सक्षम हुन्छन्। तपाईं वास्तवमा एक निश्चित तरिकाको सोच र लिङ्क तिर एक नागरिक प्रवृत्तिमा हरेक नागरिकलाई पछाडि सक्षम हुन चाहानुहुन्छ। तपाईंले धारणालाई मार्गदर्शन गर्न मिडिया प्रयोग गर्नुहुन्छ र मानिसहरूलाई यो स्वाद र रंगहरूको प्यालेट प्रस्ताव गर्नुहोस्। यदि तपाईं सबैलाई समझाउन सक्षम हुनुहुन्छ कि यो एक निश्चित स्वाद वा रङसँग राम्रो हुन, तपाइँ मान्छेलाई मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईं ठीक तरिकाले मापन गर्नुहुन्छ तपाईको धारणा व्यवस्थापनले कसरी प्रभाव पारेको छ र मानिसहरू एक, बी वा सी पछि भेडा गर्न कसरी सफल हुन सक्दछन्। यो यसको बारे सबै हो जीवनको दर्शनमा पकड राख्नुहोस्। त्यो कसरी भनिन्छ: धारणा व्यवस्थापन.
यद्यपि, तपाईंले सम्पूर्ण प्यालेट प्रस्ताव गर्नु पर्छ। निस्सन्देह तपाईं हेर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईं सबै र एकै नै विचार सबैलाई समझाउन सक्नुहुन्छ, तर मानव मनोचिकित्सा फरक काम गर्दछ। एक मर्सिडीज, अन्य वोल्क्सवैगन वा बीएमडब्ल्यू ड्राइभिङ मनपर्छ। तपाईं पनि ती सबै फरक विचारहरू खिच्न सक्षम हुनु र अधिमानतः तिनीहरूलाई पठाउन सक्षम हुन चाहानुहुन्छ।
मानिसका विचारहरू रङ्ग र स्वादको रूपमा विशेषता हुन सक्छ। तपाईं मानिसहरूलाई जित्न सकेसम्म कोटिहरूमा राख्न चाहानुहुन्छ, ताकि तपाइँ त्यस समूहमा मिडिया द्वारा निर्मित निश्चित व्यवहार वा व्यवहार लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। "तपाईं सही हुनुहुन्छ, किनकि तपाईसँग त्यो र त्यो राय छ" तपाईं सुधारिएको, सुधारिएको वा क्याथोलिकको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, आजकल राजनीतिले स्वाद वितरणको भूमिका खेल्छ र यो छवि हो कि एंकर छ। राजनीति नयाँ चर्च हो। र तपाईंसँग एक निश्चित चर्चसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ, अन्यथा तपाईंले गन्ती गर्नुहुन्न। तपाईं जस्तै अज्याक्स, पीएसवी, वा फेइनेनोर्डको लागि हुनुपर्दछ। त्यसैले तपाईं बायाँ, दायाँ, उदारवादी, सामाजिक लोकतान्त्रिक र यतिमा हुनुहुन्छ। यो तपाइँ कसरी 'ब्रान्डहरू' लाई लिंक गर्न सक्नुहुन्छ: चिन्ह लगाउनुहोस्.
रबर्ट जेसेननले नेदरल्यान्डमा अमेरिकामा एलेक्स जोन्सले के गर्ने गर्दछ: मानिसहरुलाई एक विशेष आंदोलनको सदस्यको रुपमा वर्गीकृत गर्न सक्दछ (मार्किंग, मार्किंग, स्ट्रिमा / स्ट्याम्प मुद्रण गर्नुहोस्)। को शैली मा "ओहो, तपाईं त्यस्तो जेन्सेन समर्थक हुनुहुन्छ", को रूप मा अमेरिका मा भन्न सकिन्छ"ओहो, तपाईं यस्तो एलेक्स जोन्स प्रशंसक हुनुहुन्छ"(Infowars.com)। तपाईं पनि यसमा स्टाम 'साजिश विचारक' राख्न चाहानुहुन्छ, तर यो नीदरल्याण्डमा एकदम बढि थप गर्न को लागी अधिक सुविधाजनक छ। कुनै पनि मामला मा, 'विद्रोह' कठोरता राम्रो तरिकाले फिट भएको छ।
रबर्ट जेन्सनले पनि डोनाल्ड ट्रम्पसँग पूर्ण रूपमा लिङ्क गर्न सक्छन्, किनभने उनले ट्रम्पको चुनाव विजयको भविष्यवाणी गरे र तिनले ट्रम्पको लागि मतदान गर्थे भने उसले (हेर्न सक्छ यहाँ)। पहिलो RTL5 प्रसारण पछि, उनी तुरुन्तै लिङ्क गर्न सक्थे र तुरुन्तै ए-इ-इ-विरोधी विरोधी (जसको पहिलो अतिथि: निगेल फराज) को परिणामस्वरूप। यो सही इरादा हो। एकपटक तपाईं दाँयामा मानिसहरूको समूहलाई सजग गर्न सक्षम भएपछि एकपटक तिनीहरूलाई ठूलो ढोकाहरू र सबै दु: खका कारणहरूसँग जोड्न सक्दछन्।नकारात्मक), तर पहिला समुह बढ्छ, किनकि तपाईं जहाज सिंक गर्नु अघि तपाईंको सुरक्षा नेटमा जित्न सक्नु हुन्छ।
समाजमा हरेक विचारको लागि सुरक्षा नेट छ। सबै इन्टरनेट ट्राफिक, अनलाईन वार्तालापको ठूलो डाटा विश्लेषणहरू, ई-मेलहरू, टेलिभिजन कुराकानीहरू, सोशल मिडिया गतिविधिहरू र स्थान डेटाको सबै अन्य इनपुट (तपाइँ के निर्भर हुनुहुन्छ र तपाईं के सँग व्यवहार गर्नुहुन्छ) को को रायमा स्पष्ट सेवा प्रदान गर्दछ पालन ​​गर्दछ। निस्सन्देह कि औपचारिक रूपमा नगर्ने र अवैध रूपमा सक्षम हुनका लागि तपाईं जस्तै पान्जाहरू छन् जर्ज वान होट्स त्यसपछि त्यसपछि त्यो कथालाई नियन्त्रण गर्ने तरिकामा डुब्न अनुमति दिइयो।
सुरक्षा नेट रणनीतिकर्ताहरूको काम हो तपाईंलाई महसुस गर्नुहोस् कि यो तपाईंको लागि व्यवस्थित हुनेछ र तपाईंलाई माछा माछा नेटमा पकड। तथापि, शक्तिको एक मोहराले सत्ताको कुर्सी खुट्टामा केहि खण्डहरू गर्न अनुमति दिनेछ, तर तिनीहरू पूर्णतया हराएनन्। के रबर्ट जेसेनन यस्तो शक्तिको मोडा छ? तिनको ट्यूबबाट हटाउनको आचरणले प्रभाव दिन्छ कि यो मामला होइन, र यो वास्तवमा इरादा थियो। जेन्सेनलाई केही समय पछि (नीलामी पछि) नीदरल्याण्डमा राखिएको थियो र अब एक नयाँ इन्टरनेट च्यानल सुरु गर्न सक्दछ, ताकि सुरक्षा नेट भर्न सक्छ। एक पल्ट नेट नेट जहाज माछा संग भरी छ, एक पल्ट डबल डाउन मा बम को उजागर। के तपाईं मेरो विचार चाहनुहुन्छ? मेरो विचार ..
हो, रबर्ट जेसनन शक्तिको प्याज हो।
स्रोत लिङ्क सूची: ad.nl, volkskrant.nl
रबर्ट जेसेन्सन र अर्नोल्ड करस्कन्सका ब्लैक बुक एनओएस न्यूज 'नियन्त्रण विरोधी प्रदर्शन: संलग्न नगर्नुहोस्
रबर्ट जेसेन्सनले भनिने दायाँ-वाइङ विद्रोह, तर वास्तवमा स्थापनाको वेश्या
ट्याग: buis, de, विशेष, भेटियो, जेन्सेन, jensen.nl, नयाँ, रबर्ट, RTL5, tv, वैन, वेबसाइट
24 अप्रिल 2019 मा 23: 24
त्यो जेन्सेन शक्तिको प्याज निश्चित छ।
खैर, उसले आफ्नो आगामी वेबसाइटमा होमोफोबिक हुन सक्छ
स्टीवन एन्डर्सनलाई आमन्त्रित 'ईसाई' पुजारी। दुवै सन्दर्भमा मिडियामा अत्यन्तै हराएको जोखिम देखाउँदै, माथिको एजेंट प्रोटोक्रेक्टरको रूपमा, अभिव्यक्तिको तथाकथित स्वतन्त्रतालाई रोक्नको लागि कथनहरू बनाउनुहुन्छ, अब यो अवस्थित छ, (समस्या-प्रतिक्रिया-समाधान)। अहिले आउनु हुन्छ? यसले मलाई आक्रमण गर्छ कि अधिकांश व्यक्तिहरू, पुजारीहरू / पादरीहरूले "क्रिस्टिस्ट" गर्नेहरूलाई समर्थन गर्छन् जुन तिनीहरू सबै लुकाउँछन्। त्यो पृष्ठभूमि कस्तो हुनेछ? ठीक छ, 'ईसाई धर्म' को एक जन को रूप मा प्रयोग गरिन्छ हेनानी द्वारा साधारण आबादी को दिमाग को रूप मा। तिनीहरूले सधैं यो गरे।
25 अप्रिल 2019 मा 00: 05
सौभाग्य देखि स्कूल मा धेरै बच्चाहरु को एक राम्रो नागरिक कसरी सिक्न सिक्छन्:
25 अप्रिल 2019 मा 09: 33
मैले भर्खरै "नागरिकता विद्यालय" वेबसाइटको जाँच गरें र मैले देखे कि यो वेबसाइटले "नागरिकता" को परिभाषा प्रदान गर्दैन। केही अनावश्यक खोजी पछि, यो देखिन्छ कि यो वेबसाइटले मान्छेलाई सोध्दछ (शिक्षामा काम गरिरहेको छ) कुन कुराको साथ उनीहरूको दर्शन नागरिकताको सन्दर्भमा छ: "तिम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ?"
त्यसपछि, निम्न3बिन्दुहरू उल्लेख गरिएको छ, जुन उनीहरूलाई दिईएको दृष्टिमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ:
नागरिकताको दर्शन, नागरिकको प्रकारको पछि लागिएको छ र विद्यालयले यसलाई बनाउन सक्छ कि योगदान;
विद्यालयको पहिचान, जुन जीवन र / वा शैक्षणिक-सिद्धिक सिद्धान्तहरूको दर्शनले निर्धारण गर्दछ;
विद्यालयको सन्दर्भको विशेषता, पड़ोस, छात्र आबादी र आमाबाबु सहित।
वेबसाइटमा "नागरिकता" र "सामाजिक एकीकरण" सँगै उल्लेख गरिन्छ। जाहिराव यस वेबसाइट को पीछे मान्छे को उद्देश्य हो कि एक राम्रो नागरिक सामाजिक रूप देखि एकीकृत छ। तथापि, समस्या भनेको आजको समाज समाज होइन। दोस्रो विश्वयुद्ध (अतिथि कर्मचारीहरूको आगमन गर्नु भन्दा पहिले) यो समाज यो समाजमा थिएन र कहिलेकाहीँ हामी समाजमा उनीहरूका पाइपहरू नृत्य गर्छौं, जसले ठूलो टोलमा आफ्नो टावरबाट मानिसहरूलाई कसरी निर्धारण गर्छ भन्ने कुरालाई कसरी थाहा छ (कसरी) जीवन। हालका शासकहरूले मानिसहरूको बीचको एकताको चाहना गर्दैनन्। यदि त्यहाँ वास्तविकता एकता थियो भने, शासकहरू र उनीहरूको सिर्जना गरिएका प्रणालीहरू अति उत्तम हुनेछन्।
माथिको बिन्दु2र3स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि वर्तमान प्रणालीमा एकताबद्धता कहिलेसम्म पुग्दैन, जबसम्म जनताले हालको प्रणालीलाई समर्थन गर्दछ, किनकि तपाइँ विद्यालयको पहिचानलाई कसरी बनाए राख्न र बेरोजगार क्षेत्रहरूमा बाँचिरहेका व्यक्तिलाई सहन गर्न सक्नुहुन्छ (र त्यहाँ स्कूल जानुहुन्छ) ), जबकि अन्य ठूलो विला मा रहछन? तैपनि मानिसहरू साँचो समाजको पछि लाग्न चाहन्छन्!
वर्तमान प्रणाली aristocracy द्वारा बनाईएको थियो, जुन गोपनीय रूपमा नियन्त्रणमा छ। तिनीहरू राम्रो नागरिक चाहन्छन्। राम्रो नागरिक के हो? एक राम्रो नागरिकले केकको टुक्राको रूपमा इन्डोच्छ्रेसन र प्रचारलाई निगल गर्न व्यवस्थित गरेको छ र यसैले बुद्धिमान र स्वच्छ मानान्छ। यसको अर्थ भनेको एक असल नागरिक "जस्तै यो" व्यवहार र व्यवहारमा अभिवादन द्वारा लागू प्रणालीहरू पालन गर्छ, जबकि आर्यवाद स्वतन्त्र रूपमा प्रायः कानुनी नियमहरू र नियमहरू पालन गर्न असफल भए।
यो मलाई आश्चर्य छ कि 2019 मा धेरै मान्छे को अब पनि लाश को रूप मा टेलीभिजन देखना र आफ्नो कुत्ते को काम संग प्रणाली को समर्थन गर्दछ। तपाइँ त्यो दाहिने पढ्नुहुन्छ: क्यूबाबा! आखिर, तपाईंलाई "राम्रो काम" चाहिन्छ! बच्चाहरूलाई विद्यालय पठाउनुहोस् र उनीहरूलाई एकीकृत र शर्त दिनुहोस्, ताकि तिनीहरूसँग "राम्रो काम" को राम्रो मौका पाउनेछ! मानिसहरूलाई धर्मार्थ दिन दिनुहोस् र आफ्नो कर तिर्न दिनुहोस्। ध्यानाकर्षणहरूले समस्या समाधान गर्न मद्दत गरिरहेका छन् र कर प्यानिहरूसँग हामीसँग एक शान्ति बल छ जसले विरोधाभास क्षेत्रमा शान्ति ल्याउनेछ ... सबैभन्दा उन्नत हतियार संग। उत्कृष्ट!
25 अप्रिल 2019 मा 10: 52
के तपाईंले पहिले यो जाँच गर्नुभयो?
जब हामी कहिलेकाहीँ सहमत हुन्छौं, सुरुबाट सुरु गर्नुहोस्। यदि हामी 8 दिन भित्र बच्चाहरु घोषणा गर्न बाध्य छ भने, सार्वभौम।
25 अप्रिल 2019 मा 11: 02
त्यो वेबसाइट प्रायः शिल साइटको रूपमा उजागर गरिएको छ। यद्यपि, विचार राम्रो छ।
25 अप्रिल 2019 मा 02: 03
उनी भन्छन कि दाहिने दिमाग व्यक्तिले सुन्न चाहन्छ। यदि तपाइँ वेबसाइट जाँच्नुहुन्छ भने यो साँच्चै तपाईंलाई आनन्दित तुल्याउँदैन। बायाँ नीदरल्याण्डको मालिक हो, जस्तै समाचार, त्यसमा।
अब हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं कि विवाहले पक्कै कुनै फरक पार्दैन। उनीहरूले बाँया र दायाँ तारहरू खिच्छन्, लिंग तटस्थ भन्छन्
चाहे हामी इलेक्ट्रोनिक वा डीजल चलाउछौ, शायद यो घोडाले राम्रो राम्रो छ।
तिनीहरू हामीलाई तटस्थतामा डराउँदैछन्। हामी तटस्थ हुनुपर्छ र प्रणाली फिड्नै पर्छ।
यो9/ 11 को अर्थ हो।9हाम्रो ब्रह्माको शीर्ष हो। शैतान (दस भन्नुहुन्छ) ईएल पनि (दुई टावरहरू / दाँया-बायाँ) र twelve हामीलाई कम आवृत्तिमा खींच्न चाहानुहुन्छ। यी महिनाहरूमा केही हासिल गर्न सकिँदैन (अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर) (जाडो मरेको छ)।
तपाईंको9मा रुनुहोस् र जान्नुहोस् कि तपाईं यस भौतिक संसारबाट अलग आत्मा हुनुहुन्छ।
25 अप्रिल 2019 मा 06: 39
ठीक छ, कि ती सबै मीडिया र अमेरिका को 'connoisseurs' थाहा थिएन कि ट्रम्प राम्रो मौका थियो ... सम्भवतया खेल। लिफ्टमा घिमिरेको माध्यमबाट हेर्नु भएको छ कि यो अग्रिम स्पष्ट भयो।
हामी कसरी हेरचाह गर्दै छौँ बारेमा: @ 13: 50 को बारेमा पुस्तक Hersenhack
25 अप्रिल 2019 मा 09: 48
नियन्त्रित विरोधको अनुहार हेर्नुहोस् ...
भेडाहरू कुन कुराले देख्दैनन् कि एलेक्स जोन्स वास्तवमा उनीहरूलाई "हामीलाई यो गर्न र त्यस डोनाल्ड ट्रम्प गर्छन्" लाई निर्देशन दिइरहेछ ... किनभने हामीले यसलाई माथिबाट आशा गर्नुपर्दछ र राजनैतिक नेताहरूले मदतको लागि कल गरिरहेका छन्।
नहीं, तपाईंलाई आफु को बडा डेटा फीड न गरेर टीवी को देखन को लागी रोक्न को लागी रोकन को लागी, अब चुनाव को लागि हिड नहीं रहछन र अब सिस्टम मा नौकरी नहीं ले रहयो।
25 अप्रिल 2019 मा 09: 49
राम्रो टी-शर्ट पनि ...
6 जून 2019 मा 02: 54
यो तेजी देखि स्पष्ट हुन्छ कसरी हर्स हिंड्ने:
नियन्त्रित विपक्षी वेबसाइट न्युफर्नसेजले नियन्त्रण विरोधी सुरक्षा नेट जेन्सेनलाई धक्का दिन्छन्:
सबैभन्दा खराब प्रकारको ट्र्याक्टरहरूले शक्तिको लागि सुरक्षा नेटको रूपमा सेवा गर्न प्रतिरोध गर्न तिरस्कार गर्छन्।
6 जून 2019 मा 09: 47
आह, जेन्सेनले आफ्नो काम गरे र रिक्त हस्तान्तरण हुनेछैनन्। Baudet Jensen मार्फत छ
बढवायो। अन्तर्वार्ता जब तपाईं पिरामिड चढ्नुहुन्छ तपाईं सधैँ हेनभरमा आउनुहुनेछ। बाँया, दाँया फरक छैन र दाँया र बायाँ अवस्थित छैन। वास्तवमा, नेदरल्याण्डमा कुनै पनि विरोधी विरोध छैन।
दोस्रो कोठा एक शो हो। सांसदहरू न त टोपी न त ब्रिम जान्छन् र पहिले नै अर्को कामको खोजीमा व्यस्त छन् जुन तिनीहरू संसदको सदस्य हुन्छन् जब तिनीहरूको कोठा सदस्यता समाप्त हुनेछ। वास्तवमा, साम्राज्य नागरिक सेवाको एक सेकेन्ड कम से कम विभाग हो।
« नोटरे-डेम आगो:5वर्ष पुरानो ओक (सुखा) बीममा मिनेटको लागि 300 एउटा परीक्षण
पोजिटिभ्मवाद र आशावाद! »
कुल भ्रमण: 13.966.198